अवकाशप्राप्त सैनिकको अभिव्यक्तिमाथि कडाईः सेनाको आचार संहिता सप्ताह शुरु
नयाँ आचार संहितामा समेटिएका विषयहरु हेर्नुहोस्
प्रकासित मिति : २०७६ बैशाख ७, शनिबार प्रकासित समय : १०:१८
काठमाडौं । कहिले आर्थिक अनियमितता र चलखेलका खबर, कहिले भर्ना, पदोन्नति वा शान्ति सेनामा सहभागी हुन भनसुन र दबाबका खबर आइरहेको बेला नेपाली सेनाले आचार संहिता सप्ताह मनाउन लागेको छ ।
पछिल्लो अवस्थामा सरकारका उच्च अधिकारीका विवादास्पद भेटघाट, अभिव्यक्ति वा क्रियाकलापका खबरले जनतामा चिन्ता बढेको देखिन्छ ।
त्यस्ता केही प्रकरणमा नेपाली सेनाका उच्च अधिकारी समेत मुछिएको समाचारहरु आएको बेला शुक्रबार एक कार्यक्रमबीच आचार संहिता सप्ताह शुरु गरिएको हो ।
नेपाली सेनाका सेवारत वा अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीहरू यस्तै यस्तै प्रकरणमा मुछिएका खबर नेपाली सञ्चार माध्यममा छ्यापछ्याप्ती आएका छन । नेपालको सबैभन्दा पुरानो र सम्मानित मध्येमा पर्ने सैन्य संगठनले सम्पूर्ण दर्जाको लागि नयाँ आचार संहिता ल्याएको हो ।
नयाँ आचार संहिता नेपाली सेनाका सेवारत र अवकाशप्राप्त दुवैथरी कर्मचारीमा लागु हुने भनिएको छ। अनुशासन र आचरणप्रति आफ्नो सङ्गठन निकै गम्भीर भएको सङ्केत दिँदै आठ महिनाअघि पद सम्हालेका नयाँ सेना प्रमुख महारथी पूर्णचन्द्र थापाले दिएका छन ।
सेना प्रमुख महारथी थापाले आफ्ना सबै अधिकृत तथा जवानहरूका लागि आचार संहित सप्ताह सुरु गरेको जनाएका छन्। सैनिक आचार संहिताबारे प्रशिक्षण दिइने यो कार्यक्रम सात दिनसम्म चल्दैछ ।
यस्तो सप्ताह हरेक वर्ष वैशाखको पहिलो साता सञ्चालन गर्ने उनको योजना छ। नेपाली सेनाका अधिकारीहरूका अनुसार नेपाली सेना विभिन्न विवादहरूमा मुछिएका विवरणहरू सार्वजनिक हुन थालेपछि आचार संहिता कडाइका साथ लागु गराउन तत्पर भएको हो।
पछिल्ला केही प्रकरणहरू केलाउँदा नेपाली सेना मूलतः तीन प्रकारका विवादमा मुछिने गरेको पाइएको छ। ती तल प्रस्तुत गरिएका छन ।
१. आर्थिक अनियमितताको विवाद
नेपाली सेनाले पछिल्लो समयमा देशभित्र काठमाडौं तराइ फास्ट्याक भनिने एक्स्प्रेसवे लगायतका विभिन्न पूर्वाधार परियोजनाहरूको निर्माणको समेत जिम्मेवारी पाइरहेको छ। त्यसक्रममा नेपाली सेना आर्थिक अनियमितता र अन्य विवादमा फस्ने खतरा बढेको छ।
त्यसैले हुनसक्छ आज सैनिक आचार संहिता सप्ताह उद्घाटन गर्ने क्रममा महारथी थापाले भने सेनाले आचार संहिता सप्ताह मनाउनु पर्ने अवस्था आउनु आफैँमा विडम्बना र गम्भीर घटना हो। भ्रष्टाचार लगायत अन्य विकृति अहिले सुधार गर्न नसके कहिल्यै सुधार हुने छैन।
हालै नेपाली सेनामा भर्ना छनौटका क्रममा अनियमितता गरेको पाइएका १८७ जनाविरुद्ध विभिन्न कारबाहीको प्रक्रिया थालिसकिएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी विज्ञानदेव पाण्डेले बताए।
उनले भने, केही आरोपीविरुद्ध सैनिक अदालतमा रिट निवेदन परिसकेको छ भने अन्य केहीविरुद्ध सैनिक कानुन अनुसारका कारबाही प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइसकिएको छ।
महारथी थापाले सैनिक सङ्गठनभित्र गुनासो र उजुरी गर्न संयन्त्र बनाइएको जानकारी दिँदै आउने दिनमा नेपाली सेनाले आर्थिक अनियमितताविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने आफ्नो योजना दोहोर्याएका छन्।
२. भनसुन र दबाबको विवाद
नेपालका अन्य सङ्गठनहरूजस्तै नेपाली सेना पनि विभिन्न खाले सम्पर्कसुत्र, आफ्ना मान्छे वा बिचौलियाबाट हुने भनसुन र दबाबबाट मुक्त छैन। नेपाली सेनाको नयाँ आचार संहिताले त्यसलाई समेत गम्भीरतापूर्वक लिएर सम्बोधन गर्ने जमर्को गरेको छ।
शुक्रवारको कार्यक्रममा महारथी थापाले त्यस विषयलाई पनि उठाए। उनले भने, आर्थिक अभाव छ भनेर अनियमितता गर्ने छुट कसैलाई छैन।
उनले भर्ना, छनौट, पदोन्नति, शान्तिसेनामा सहभागिताजस्ता विषयमा प्रभावशाली व्यक्तिबाट भनसुन गराइ दबाब दिने प्रयास भएमा त्यसको अभिलेख राखिने बताए।
भनसुन र दबाबका आधारमा अघि बढ्ने प्रवृत्ति कायमै रहेमा त्यस्ले सैनिकको वृत्‍ति विकासमा असर पर्दछ। उनले भने, हाम्रो सङ्गठनमा यो प्रवृत्तिको अझै अन्त्य हुन सकेको छैन-उनले भने ।
नयाँ आचार संहिताले स्पष्ट रूपमा भेटघाट र सार्वजनिक अभिव्यक्तिका विषयमा गर्न हुने, गर्न नहुने र गर्नु पर्ने विषयहरू स्पष्ट पारिदिएको छ।
त्यसबाट नेपाली सेनाका सकल दर्जाका सदस्यहरूलाई सैनिक सदाचार र आचरण कायम गर्न स्पष्ट मार्गनिर्देशन मिल्ने जङ्गी अड्डाका अधिकारीहरूको आशा छ।
नयाँ आचार संहितामा समेटिएका विषयहरु यस्ता छन…
सैनिक आचार संहिताले लैङ्गिक विषयमा पनि सैनिक तथा अधिकृतहरूलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ। नयाँ आचार संहितालाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्दै महारथी थापाले आग्रह गरे ।
महारथी थापाले जङ्गी अड्डाको भेलामा सैनिक आचरण विपरितका कुनै पनि कार्य सङ्गठनमा मान्य र क्षम्य हुनु हुँदैन भन्ने आफ्नो मान्यता सबैलाई पुनः स्मरण गराएका थिए। बीबीसीबाट